Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Intelligence – နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ
Category Archives: Intelligence – နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2zGDK4s http://ift.tt/2rs33WN
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on October 20, 2017 by freeburma
လက်နက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကို သတ္တိရှိရှိ X-ray အဖြတ်ခံတာက စဉ်းစားစရာ အများကြီးဖြစ်ပါတယ် – သူရဦးအောင်ကို
The post လက်နက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကို သတ္တိရှိရှိ X-ray အဖြတ်ခံတာက စဉ်းစားစရာ အများကြီးဖြစ်ပါတယ် – သူရဦးအောင်ကို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2gQYdg5 http://burmese.dvb.no
Posted on October 18, 2017 by freeburma
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့တွင် ဆူပူရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်ဆိုသောသူကို နိုင်ငံတော်အကြည်အညို ပျက်စေမှု ဖြင့် စစ်ဆေးမည်
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၇ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် စည်းရုံးခဲ့သည်ဟူသော အမျိုးသားတစ်ဦးအား ပုဒ်မ ၁၂၄ (က ) နိုင်ငံတော်အကြည်အညိုပျက်အောင်ပြုခြင်းဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မကွေးခရိုင် တရားရုံးမှ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက် ၁၁ နာရီအချိန်ခန့် မကွေးခရိုင်တရားရုံး (ဒုတိယ)ရုံးချိန်တွင် ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်မိမိစိန်က တရားလို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းဆွေအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ယင်းသို့ စစ်ဆေးရာတွင် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲစခန်းသို့ ကျင့်(၂၀၂)ဖြင့် ချပေးခဲ့ကြောင်း ရဲစခန်းမှ ပြန်လည် တင်ပြခဲ့သော ရဲစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာအား လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အမှုအား ပုဒ်မ ၁၂၄ -က အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြုခြင်းဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်ရေး စည်းရုံးခဲ့သည်ဟူသော မကွေးမြို့ အောင်မေတ္တာ Bအုပ်စု ၂လမ်း အောင်စေတနာဘုန်းကြီးကျောင်း တောင်ဘက်ပေါက် အနီးနေထိုင်သူ အောင်ကျော်မြင့် အသက် ၆၀ခန့် အမျိုးသားအား ရုံးချိန်ရောက်ရှိရေး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ရုံးချိန်အား အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်ရေး လှုံ့ဆော်ပေးရန် စည်းရုံးခဲ့သည်ဟူသော အမျိုးသား တစ်ဦးအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူပေးနိုင်ရန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းဆွေက တရားလိုပြုလုပ်၍ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မကွေးခရိုင်တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း၊အဆိုပါ ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှုကို မကွေးခရိုင် တရားရုံး တရားသူကြီး ဒေါ်မိမိစိန်က ရာဇသတ်ကြီး အမှုအမှတ် ၅၅/၂၀၁၇ ဖြင့် လက်ခံခဲ့ကြောင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးက တရားလိုပြု၍ လျှောက်ထား ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းလျှောက်ထားချက်တွင် စည်းရုံးခံရသူနှင့် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို အပါအ၀င် သက်သေငါးဦး ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲခန့်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုသည် ၎င်း၏ ရုံးခန်းသို့ သတင်းမီဒီယာများအား ဖိတ်ခေါ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်စေရေး လှုံ့ဆော်ပေးရန် မကွေးမြို့မှ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ကျပ် ၅၀၀၀၀၀ ပေးမည်ဟု စည်းရုံးသူ ရှိနေပြီး မကွေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများအား ဆောင်ရွက်သင့်သည်များ ညွှန်ကြားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၁၂၄(က)တွင်မည်သူမဆို နုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်အသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထင်ရှားသော ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြည်ထောင်စုအတွက်၊ သို့တည်းမဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော အစိုးရကို မုန်းထားအောင်သော် လည်းကောင်း၊မလေးစားအောင် သော်လည်းကောင်း ပြုလျင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ပြုရန် အားထုတ်လျင် သို့တည်းမဟုတ် မေတ္တာပျက်အောင် လှုံ့ဆော်လျင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့လှုံ့ဆော်ရန် အားထုတ်လျင်၊ ထိုသူကို ငွေဒဏ်နှင့်တကွ တစ်သက်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊ငွေဒဏ်နှင့် တစ်သက်ကျွန်းအောက်လျော့သည့် တစ်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ငွေဒဏ်နှင့်တကွ သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်သက်သက်ဖြစ်စေ ထိုသူကို ချမှတ်ရမည်လို့ ပြဌာန်းထားကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2xLlFAT http://ift.tt/OTcCHv
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2gonp0u http://ift.tt/2rs33WN
ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် နေအိမ်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေးနေဟု နေပြည်တော်ရဲမှူးကြီးပြော
နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ လက်နက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် နေအိမ် ၄ လုံးကိုပါ ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်က ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြု ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ညက နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ အားကစားဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့ သားဖြစ်သူ ACE ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနဲ့ အဖော် ၂ ယောက်ထံကနေ သြစတြေးလျနိုင်ငံထုတ် ၉ မမ ပစ္စတို ၂ လက်နဲ့ ကျည် ၇၂ တောင့်၊ WY စိတ်ကြွဆေးပြား ၁၂ ပြား၊ ICE မူးယစ်ဆေး ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ်၊ ဆက်သွယ်ရေးစက် ၃ လုံး စတာတွေ ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် ACE ဟိုတယ်ကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရာမှာတော့ ပစ္စတို ၉ လက်၊ ကျည် ၈၉၂ တောင့်၊ ကျည်အိမ် ၁၆ ခု၊ အမ် ၁၆ လက်ကိုင်ကွင်း ၁ ခု၊ ပစ္စတိုအိတ်အနက်ရောင် ၇ လုံး၊ ကျည်ကာအင်္ကျီ ၁ ထည်၊ စနိုက်ပါ မှန်ပြောင်း ၁ လက်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ နေပြည်တော်ကောင်စီ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနဲ့ အပေါင်းပါတွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေ၊ လက်နက်ဥပဒေတို့နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူပြီး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ကာ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် နေအိမ် ၄ လုံးကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် ဟိုတယ်တွေနဲ့ နေအိမ်တွေကို စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေသလို ရန်ကုန်မှာလည်း ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် ကုမ္ပဏီမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
အမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ နောက်ထပ်လူ ၅ ယောက်ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက် အမှုနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဖမ်းဆီးခံရသူဟာ ၈ ယောက် ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးတင့်ဆန်းရဲ့ သားဖြစ်သူ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း အပါအဝင် ၃ ယောက်ကို နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ လက်နက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူ ဖမ်းမိခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဖမ်းဆီးရမိသူ ၅ ဦးကတော့ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းရဲ့ ဇနီး၊ ACE ဟိုတယ် မန်နေဂျာနဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲမှူးကြီး ဇော်ခင်အောင်က ပြောပါတယ်။
အများပြည်သူကြား စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေတဲ့ NATIONAL SECURITY COUNCIL တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဗွီဘီသတင်းဌာနက မေးမြန်းရာမှာ ကားတွေဟာ တရားဝင်လိုင်စင်ရရှိထားတဲ့ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးယူဖို့ မရှိကြောင်းနဲ့ NATIONAL SECURITY COUNCIL တံဆိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိဘဲ စိတ်ကူးနဲ့ လျှောက်တပ်ထားတဲ့ အနေအထားသာဖြစ်တယ်လို့ ရဲမှူးကြီးဦးဇော်ခင်အောင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
The post ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် နေအိမ်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေးနေဟု နေပြည်တော်ရဲမှူးကြီးပြော appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2yobir0 http://burmese.dvb.no
via Home http://ift.tt/2yrYxLJ http://ift.tt/OTcCHv
မဘသ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အစိုးရ စုံစမ်း
မဘသကို လေးစားကြည်ညိုသူတွေ လှူတဲ့ ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၂)ထောင်ခန့် ရှိ
အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ မဘသ အပါအဝင် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရကနေ စုံစမ်းတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်နဲ့ အစိုးရဘဏ်တွေမှာ မဘသအပါအဝင် ဘာသာရေး လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ ငွေကြေးအပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေပေးဖို့ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနကနေ ဗဟိုဘဏ်ကို ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2r6N40B http://ift.tt/Y2RpwJ
အကြမ်းဖက်သမား ၃ ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသော လက်နက်
မောင်တောမြို့နယ် သဝင်ချောင်းကျေးရွာမှာ လက်နက်များနှင့်အတူ အကြမ်းဖက် ၃ ဦးအား ယနေ့ နံနက်က ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း မောင်တောတောင်ခြင်းရှိ ရဲကင်းစခန်းမှ ယာယီတပ်ရင်းမှူး နေထွန်းလင်းက ပြောသည်။
မောင်တောတောင်ခြင်းရှိ ရဲကင်းစခန်းများအား တုတ်၊ ဓါး၊ လုပ်သေနတ်ပါရှိသော အကြမ်းဖက်သမားများမှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မည်ဟု သတင်းရရှိ၍ ယာယီတပ်ရင်းမှူး နေထွန်းလင်း ဦးစီးတပ်ခွဲ (၁) နှင့် ဒုရဲမှူးကြီး သန့်ဇင်ဦးအဖွဲ့ အင်အား ၅၀
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2r5rzex http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on May 24, 2017 by freeburma
“ဘယ်သူ ဓမ္မလဲ၊ အဓမ္မလဲဆိုတာ သမိုင်းက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်”သူရဦးအောင်ကို (ရုပ်သံ)
အစွန်းရောက် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ထောက်ပံ့တဲ့ ငွေကျပ် သန်း ၅ ထောင်ခန့်ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေရထားပြီး ရာနှုန်းပြည့် အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ သာသနာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရ ဦးအောင်ကိုက ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာမှာ မေ၂၄ရက် မနက် က ကျင်းပတဲ့၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက မီဒီယာတွေရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေ ပြန်လည်ဖြေကြား တာပါ။
The post “ဘယ်သူ ဓမ္မလဲ၊ အဓမ္မလဲဆိုတာ သမိုင်းက အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်”သူရဦးအောင်ကို (ရုပ်သံ) appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2rivJmb http://burmese.dvb.no
Posted on May 23, 2017 by freeburma
The post မဘသ အဖှဲ့ဖကျြသိမျးရနျ မဟနအဖှဲ့ ညှနျကွား appeared first on ဧရာဝတီ.
via သတငျး – ဧရာဝတီ http://ift.tt/2qS9liH http://ift.tt/2n6ia4a
အမျိုးဘာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေကိုလည်း ဇူလှိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖျက်သိမ်းဖို့လည်း အဲဒီအမိန့်စာမှာ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2qRffAm http://ift.tt/Tf1V41
Posted on May 10, 2017 by freeburma
ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုက်ခန်းတခုမှာ တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေရှိတယ်ဆိုပြီး သံဃာတချို့ ပါဝင်တဲ့ မျိုးချစ်အင်အားစုဆိုသူ လူတစုက အတင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးတော့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ် အဲဒီမှာ နေထိုင်သူတွေက ရှုတ်ချကြပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2r10wzB http://ift.tt/Tf1V41
တင်းမာနေတဲ့အခြေနေကိုသိသိနဲ့ လူအုပ်ထဲကားမောင်းလာပြီး ဆဲပြေးတာဟာ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
via Mawkun http://ift.tt/2q72lf9 http://www.mawkun.com
အစိုးရသစ်လက်ထက် ပြည်ပအလုပ်သမားစေလွှတ်မှု ၁ သိန်းခွဲနီးပါးရှိ
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပကို တရားဝင်စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမား အရေ အတွက် တသိန်းခွဲနီးပါး ရှိခဲ့တယ်လို့ အလုပ်သမား- လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအထဲက အလုပ်သမား ၁၁၃ဝဝဝ ကျော်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး၊ ၂၅ဝဝဝ က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ၅၅ဝဝ က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ၂၆ဝဝ က ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ကျန်တဲ့ ၁ဝဝဝ ကျော်က စင်္ကာပူ၊ ကာတာ၊ လာအိုနဲ့ မကာအိုတို့ကို သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2q3OcT5 http://www.rfa.org
Posted on April 18, 2017 by freeburma
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အဖက်ဖက်မှလုံခြုံရေးများ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ပြစ်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော အတက်နေ့တွင် ပြစ်မှုပေါင်း (၆၁)မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြစ်မှုများ မှာ လူသတ်မှု (၁)မှုမှ သေဆုံးသူ တစ်ဦး၊ ယာဉ်တိုက်မှု (၅)မှုမှ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၃)ဦး၊ နာကျင်စေမှု (၂၀)မှ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၂၉)ဦး၊ အခြားအမှု (၇)မှု၊ လက်နက်မှု (၂)မှု၊ ယစ်မျိုးဖမ်းဆီးမှု (၂)မှု၊ ခိုးမှု / ခါးပိုက်နှိုက် မသင်္ကာမှု (၂၃)မှု၊ သေမှုသေခင်း (၁)မှုမှ သေဆုံးသူ (၁)ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း (၆၁)မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ (၂)ဦး ဒဏ်ရာရရှိသူ (၄၂)ဦး ရှိခဲ့သည်။
ယမန်နှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်ကာလတွင် ပြစ်မှုပေါင်း (၉၆၇)မှု၊ သေဆုံးသူ (၂၇၂)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၀၈၆)ဦးရှိခဲ့၍ ယခုနှစ်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန် ကာလထက် အမှုပေါင်း (၂၃၃) မှုပိုမိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် သေဆုံးသူ (၁၃)ဦး ပိုများခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် မဟာ သင်္ကြန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သောပြစ်မှုများမှာ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌ (၃၉)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁၀)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၂၈)ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ်၌ (၃၄)မှု၊ သေဆုံးသူ (၉)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၅)ဦး၊ ကယား ပြည်နယ်၌ (၇)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆)ဦး၊ ကရင်ပြည်နယ်၌ (၁၅)မှု၊ သေဆုံးသူ (၅)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃၁)ဦး၊ ချင်းပြည်နယ်၌ (၃)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁)ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ (၁၆၇)မှု၊ သေဆုံးသူ (၂၆)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၉၄)ဦး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၌ (၄၂)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁၁)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃၅)ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၌ (၁၅၄)မှု၊ သေဆုံးသူ (၃၇)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၈၃)ဦး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ (၅၆)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁၁)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၄၅)ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ (၁၆၀)မှု၊ သေဆုံးသူ (၃၆)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၃၆)ဦး၊ မွန်ပြည်နယ်၌ မှု(၅၀)၊ သေဆုံးသူ ဦး(၂၀)၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆၆)ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ (၄၇)မှု၊ သေဆုံးသူ (၁၇)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆၆)ဦး၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၌ (၂၂၃)မှု၊ သေဆုံးသူ (၄၄)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၁၁)ဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၌ (၅၉)မှု၊ သေဆုံးသူ (၂၉)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၅၂)ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ (၁၄၄)မှု၊ သေဆုံးသူ (၂၈)ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၀၄)ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2pMrf2l http://ift.tt/1KnLGaX
Posted on April 14, 2017 by freeburma
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်္ကြန် ပထမ ၂ရက်မှာတင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် ၈၂ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှု ၅၈၆ မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၆၃၀ ဦးနှင့် ၄၈ ဦး သေဆုံးကြောင်း ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Dr. ဆူဝနာချိုင်က ပြောကြားသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုများတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မူးယစ်သောက်စားပြီး ယာဉ်မောင်းနှင်တာကြောင့် ဆိုသည်။
ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ မှတ်တမ်းအရ သင်္ကြန် ၂ ရက်အတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု စုစုပေါင်း ၉၉၅ မှု သေဆုံး သူ ၈၂ ဦး ဒဏ်ရာရသူ ၁၀၄၉ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဧပြီလ ၁၁ မှ ၁၂ ရက်၊ သင်္ကြန်ပထမ ၂ရက်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် ၁၁၆ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
via ကယန်းတိုင်းစ် http://ift.tt/2odQmtI http://ift.tt/2pcXQSh
လေဆိပ်ရှိ CCTV မှတ်တမ်းများအရ သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသော ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသူ တရားခံ အောင်ဝင်းခိုင်
နေပြည်တော်(ဧပြီ ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်)။ ။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားခံပြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အောင်ဝင်းခိုင်သည် ၎င်းတို့နိုင်ငံတွင် ရှိမနေကြောင်း အာဆံယံနိုင်ငံများ၏ ထက်ဝက်ခန့်က အကြောင်းပြန်ကြားလာသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
“သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေ အကြောင်းပြန်တာက တရားဝင်ဝင်ပေါက်တွေကနေ စစ်ဆေးမှုအရကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံ တစ်ဝက်လောက်က သူတို့နိုင်ငံကို မရောက်ဘူးဆိုတာ ပြန်ကြားလာပါတယ်” ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဧပြီ ၁၀ရက်ကပြုလုပ်သည့် အစိုးရသက်တမ်းတစ်နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
အောင်ဝင်းခိုင်သည် ပြည်တွင်းတွင်သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများ ရောက်ရှိနေပါကလည်း တိမ်းရှောင်၍ မရဘဲ အမြန်ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများအပြင် အာဆီယံပြင်ပနိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့(INTERPOL)ထံ အကြောင်းကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘယ်လိုမှ တိမ်းရှောင်လို့မရအောင် ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက် အာဆီယံအတွင်းမှာလည်း အာဆီယံ ၁၀နိုင်ငံ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့က အကြောင်းကြားထားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အာဆီယံပြင်ပရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက် အမြန်ဆုံးဖမ်းမိနိုင်အောင် ဖြန့်ပြီး အကြောင်းကြားထားပါတယ်” ဟု ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လည်း အောင်ဝင်းခိုင်၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့များထံ ပေးပို့ထားသည်ဟု ရဲချုပ်က ပြောသည်။
အောင်ဝင်းခိုင်သည် ဦးကိုနီအားလုပ်ကြံရန် ငွေပေးစေခိုင်းသူဖြစ်ပြီး လုပ်ကြံမှုမတိုင်ခင် နာရီပိုင်းအလိုက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပြီး လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်မည့်အချိန်ကို စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့သေးကြောင်း စီစီတီဗီ(CCTV) မှတ်တမ်းနှင့်အတူ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လုပ်ကြံမှုဖြစ်စဉ်အပြီးတွင် နေပြည်တော်သို့ အောင်ဝင်းခိုင် ရောက်ရှိခဲ့သေးသည်ဟုလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းက ပြောဆိုထားသည်။
“နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ မြို့နယ် ၈မြို့နယ်ကော၊ ရပ်ကျေးတွေရောပေါင်းပြီးတော့ ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာပြီးပါပြီ” ဟု ယနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ပြောသည်။ သို့သော် ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည်မှာ အချိန်ကာလအားဖြင့် ၂လကျော်ကြာနေပြီဖြစ်သော်လည်း အောင်ဝင်းခိုင်အား ယနေ့အထိ ဖမ်းဆီရမိခြင်း မရှိသေးပေ။
နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင်အား ဧပြီ ရရက်တွင် အနီရောင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းက ပြောဆိုပြီး အောင်ဝင်းခိုင် ဖမ်းမိရေးအတွက် “ရေဆုံး၊ ရေဖျား မရရအောင် လုပ်နေတယ်” ဟုလည်း ဆိုသည်။
အောင်ဝင်းခိုင်မှာ သေနတ်သမားကြည်လင်းအား ငွေပေးလုပ်ကြံရန်စေခိုင်းခဲ့သူ အောင်ဝင်းဇော်၏ ညီတော်စပ်သူ ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစားယူခဲ့သူဖြစ်သည်။
via Home http://ift.tt/2p1Vq6g http://ift.tt/1nfHMox